Qarax fashilmay oo xiriirka Iran iyo Kenya ka dhigay mid sii liidanaya - Sabahionline.com
Waxaa qoray Julius Kithuure oo Nairobi jooga
Maajo 23, 2013
Tan iyo markii ay maxkamad Keenyaan ah ay ku xukuntay labo Iiraaniyiin ah xabsi daa'in arrimo la xiriira argaggixisanimo awgood bilowgii bishan, ayaa mustaqbalka xiriirka diblumaasiyadeed ee Nairobi ay la leedahay Tehran calaamad su'aal la saaray, iyadoo la filayo in uu dib u dhigo rajada ay Iran ka qabto inay ganacsigeeda iyo joogitaankeeda siyaasadeed ku sii fidiso Kenya sanadaha soo socda. Sayed Mansour (dhexda) iyo Ahmad Mohammed (midigta), oo labadaba ah Iraaniyiin ayaa la jeebadeeyay daqiiqado ka dib markii Maajo 6-deedii xabsi daa'in loogu xukumay iyagoo jooga Nairobi dacwado la xiriira argaggixisanimo, oo ay ka mid yihiin haysasho walxaha qarxa oo sida lagu eedeeyay ay u adeegsan lahaayeen weerarro qaraxyo ah. [Simon Maina/AFP]
Dadka Kenya oo kali ka ah adduunka marka laga hadlayo aragtida wanaagsan ee ay Iran ka qabaan
Maxkamad Kenyan ah oo 2 Iiraaniyiin ah argaggixisanimo xabsi daa'in ugu xukuntay
Maxkmadda Sare ee Kenya ayaa xukuntay in labada eedaysane ee Iraaniyiinta ah ay sii xirnaadaan
Dhibaatada diblumaasiyadeed ayaa ka dhalatay weerarro fashilmay oo argaggixisanimo oo sida maxkamaddu ay xukuntay ay soo qorsheeyeen Ahmed Mohammed, oo 50 jir ah, iyo Sayed Mansour, oo 51 jir ah, oo labadaba ah muwaaddiniin Iiraaniyiin ah. Labada nin ayaa Juunyadii hore lagu xiray dibadda Laico Regency, oo ah hotel heer sare ah oo ku yaala Nairobi, oo ay Liibiya leedahay, ka dib siddeed maalmood oo daba gal dheer ay ku sameeyeen Unugta Bilayska ee Kahortagga Argaggixisada ee Kenya.
2-badii Maajo, ayaa lagu helay in ay haysteen 15 kiilo oo walxaha sida weyn u qarxa ah ee RDX, taas oo ay bilaysku ka heleen meel lagu cayaaro goolafka. Maxkamadda Nairobi ayaa sheegtay in Mohammed iyo Mansour looga shakiyay xiriir in ay la leeyihiin shabakad argaggixiso oo qaraxyo ka qorshaynaysay Mombasa iyo Nairobi. Labada ninba si joogto ah ayay u dafireen dacwadaha.
Haseyeeshee bilayska Kenya ayaa ku adkaystay go'aankooda ah in ay xiraan ayna soo dacwad joojiyaan labada Iiraaniyiinta ah.
Afhayeenka bilayska Charles Owino ayaa Sabahi u sheegay in bilayska aanay masabidan nimanka, amaba aysan ku xirin tix raac ay ka heleen dowlado ajaanib ah markii xabsiga la gaynayay.
"Bilayska Kenya ayaa baaritaan dheer ku sameeyay labada nin, iyagoo kahor tagay jarriimo argaggixisanimo oo weyn oo ka dhici laheyd dalka," ayuu yiri Owino. "Waxaan ku faraxsanahay in aan feejigneyn, iyo in aan si guul leh ku maxkamadaynay dacwadan."
Markii Mohammed iyo Mansour lagu xukumay xabsi daa'in 6-dii Maajo, ayay warbaahinta maxalliga ah iyo tan caalamiga ahba wariyeen in labada Iiraaniyiinta ah ay ka mid ahaayeen Ciidamada sare ee Quds, oo ah unug ka tirsan Ilaalada Kacaanka Islaamiga ah ee Iran oo dibadda ka howlgala.
Danjiraha Iran u fadhiya Kenya Malik Hussein Givzad ayaa eedeymahaas dafiray, isagoo sheegay in labada nin ee isaga la dalka ah ay Kenya dalxiisayaal ku ahaayeen iyagoo watay fiisayaal sharciyeeysan.
Maalintii uu xukunku dhacayay ayuu Givzad u sheegay Daily Nation in Iran ay xiriir ganacsi la leedahay Kenya, xukunka Mohammed iyo Mansour-na uusan horseedi doonin in xiriirka diblumaasiyadeed la jaro.
"Kani waxa uu ahaa hannaan garsoor, oo aan tixgalin u hayno," ayuu yiri Givzad, isagoo intaa ku daray in Iran ay gacan ka gaysan doonto in labada nin ay racfaan ka qaataan xukunka.
'Kenya waa in ay jawaabo heshaa'
Qof waliba sidaas oo kale rajo ugama qabo mustaqbalka diblumaasiyadeed ee u dhexeeya Kenya iyo Iran.
"Xukuumadda Uhuru Kenyatta waa in ay geesinimo muujiso oo ay jarto xiriirkan diblomaasiyadeed oo khatarta ah ee ay la leedahay Tehran haddii ay hayso caddeyn sirdoon oo ku filan oo sheegaysa in tuhmanayaasha la xiray ay rasmi ahaan ahaayeen shaqaalo qarsoon oo u shaqeeya Ilaalada Jamhuuriyadda Iran, sida ay ku eedeynayaan Bilayska Kahortagga Argaggixisada iyo Sirdoonka Qaranka," ayuu yiri Ignacious Kamau Njoroge, oo ah 67 jir ka howlgabay sirdoonka Kenya, haddana ah agaasimaha Isha Jaasuusiinta Caalamka iyo Baarista Guud ee saldhigeedu Nairobi yahay.
Njoroge ayaa sheegay in Kenya ay tahay in ay dib ugu yeerto danjiraheeda u jooga Iran, ayna xukuumadda Iran iyo Qaramada Midoobayba u dirto warqad ay kaga cabanayso heerka ay eedeyntu gaarsiisantahay iyo qasaaraha la filan karay haddii ay qaraxyadu dhici lahaayeen.
"Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya waa in ay ka laabataa taxadarkeeda xilligaan iyo 'hawlo sida caadada ah', ay si deg deg ah ugu yeerto danjiraha Iran u fadhiya Kenya, ayna weydiiso in uu sharraxaad ka bixiyo waxa uu ka ogyahay labada nin ee la xukumay halka uu danjiruhu war aan lagu qancin bixin lahaa, uuna shir saxaafadeed ka sheegi lahaa inaysan dambi lahayn," ayuu Njoroge u sheegay Sabahi.
"Sidoo kale, maadaama ay Iiraaniyiinta la xukumay u diideen in ay la shaqeeyaan xeer ilaaliyayaasha Kenyaanka ah iyo dacwad soo oogoyaasha sida ay xeer ilaaliyayaashu ka sheegeen maxkamadda, Kenya waa in ay Iran Jawaabo ka heshaa, haddii kale waxaan u qaadan doonnaa in labadaan nin ay dhaar dastuuri ah ku mareen in ay aamusnaadaan si ay u qariyaan waxa ay yihiin una ilaaliyaan danaha dalkooda," ayuu yiri Njoroge.
Xukuumadda Kenya waa in ay sidoo kale eegtaa sida 15 kiilo oo walxaha qarxa ah ee soo galay dalka aan loo ogaan, ayuu yiri Njoroge.
"Xukuumaddu waa in ay si weyn u baarto si ay xukuumadda Iran uga ogaato sida labadeeda muwaaddin ay ku heleen qalabka qaraxa sameeya, waxa ay dhab ahaan shaqadoodu tahay, iyo meelaha ay beegsanayeen," ayuu yiri.
Kenya ma ahan garoonka 'howlgallada aargoosiga ah ee Iran'
Robert Kamau, oo ah macallin xiriirka caalamiga ah iyo diblumaasiyadda ka dhiga Jaamacadda Nairobi, ayaa yiri Kenyatta waa in uu ka faa'idaysto fursaddaan inta ay beesha caalamku daawanayso.
"Madaxweyne Kenyatta, oo isaga isku dayaya in uu ku guulaysto naxariista beesha caalamka iyo isbahaysigooda ka dib eedeynta kaga timid Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC), waa in uu ka faa'idaystaa xilligan, uuna farriin adag ku diraa in Iran ay halis ku tahay nabadda iyo ammaanka caalamka iyo in Kenya aanay marnaba dhulkeeda ugu dul qaadan doonin tallaabooyinka caynkan ah," ayuu u sheegay Sabahi. "Tani waa sababta [Kenya] ay ugu deeqday ciidamadeeda iyo khayraadkeeda si ay gudaha Soomaaliya ugula dagaallanto al-Shabaab."
"Waxaan hubaa in joogitaanka Iran iyo howlaheeda Kenya ay ka baxsan yihiin dhaqaalaha, siyaasadda, iyo arrimaha bulshada iyo dhaqanka sharciga ah," ayuu yiri Kamau. "Waxaa hubaal ah in Iran iyo shaqaalaheeda sirdoonka ay ku mashquulsanyihiin argaggixisanimo sir ah iyo dabamaro, sida muuqata si ay uga aarsato xukuumadaha Israel iyo Mareykanka, oo ah labada dal ee ay necebtahay."
"Hase yeeshee, Kenya, dal nabad jecel ahaan, waa in ay kahortagtaa in ay noqoto garoonka howlgallada aargoosiga Iran ee dibadda," ayuu yiri.
Njoroge ayaa sheegay in xog ururin sax ah ay kashifi doonto in weerarka Kenya lala damacsanaa uu la jaan qaadayo hannaanka argaggixisanimo ee Iran. Febraayo 13-keedii 2012-kii, qarxiyayaal Iiraaniyiin ah ayaa shaqsiyaad ka tirsan safaaradaha Israel ku weeraray India iyo Georgia, maalin kadibna waxay qorsheeyeen in weerarro caynkaas ah ay ku qaadaan Thailand iyo Azerbaijan balse waa la fashiliyay. Iyadoo qeyb ka ah halbeegga hannaankeeda shaqo, ayay xukuumaddu sidoo kale dafirtay mas'uuliyadda weeraradaas, ayuu yiri Njoroge.
Simiyu Werunga, oo ah sarkaal ka howlgabay militariga Kenya, haddana ah agaasimaha fulinta Xarunta Cilmibaarista Ammaanka iyo Istiraatijiyadda ee Afrika, ayaa sheegay in uusan jirin qof filanaya in xukuumadda Iran ay qirato in ay shakhsiyaad wax qarxiya Kenya u soo dirtay.
"[Unugta] Adeegga Bilayska Kenya iyo hay'adda jaajuusiinta qaranka, Adeegga Sirdoonka Qaranka, waa in ay madaxweynaha sida ay tahay uga warbixiyaan faahfaahinta waxa ay ka ogaadeen kiiskan si madaxweynuhu uu awood ugu yeesho in uu amro tallaabo adag ee diblumaasiyadeed oo ku salaysan sirdoon cad," ayuu Werunga sheegay.
July 8, 2013 @ 10:27:13AM
Mashaakilka diblumaasiyadeed waa in lagula tacaalaa hab nidaamsan, waana in labada dhinac ee is hayaa ay isla gaadhaan heer ay wax ku qancaan. Waxaa sidaa u leeyahay dalka Iiraan iyo dalka Kenya saaxiibtinimadoodu maaha mid ay khalkhal ku keeni karaan laba shakhsi oo aan muwaadinimo lahayn, waayo waxaa labada dalba ku nool malaayiin dad ah, kuwaasoo u baahan inay mustaqbalka dalalkooda dhex marto saaxiibtinimo. Waxaad xusuusataan maahmaahda ah “Midho gunti ku jira midho geed saaran looma daadsho”, waxaanan soo jeedinayaa in xaaladan lagu xaliyo hab diblumaasiyadeed oo ay labada dhinacna noqdaan kuwo furfuran.
July 1, 2013 @ 07:07:30AM
Aniga waxaa iga yaabiyay sida ay dalalka reer yurub inoo hogaaminayaan haddaynu nahay dadka Afrikaanka ah, sidii oo aynu nahay dad aan maskax lahayn oo raaca dalalka reer Yurub amarkooda.
June 27, 2013 @ 07:37:38AM
Waxaan anigu ahay qof kiristaan ah oo Kenya jooga, waxaanan dhihi karaa muslimiinta si wacan ayaan ula noolayn oo wax dagaal ah ama colaad diimeed ahi muddo aad u dheer namay dhex marin. Muslimiinta iyo kiristaanku waxay ka dhigan yihiin walaalo markay halkan joogaan. Laakiinse waxa wax lala yaabo ah sida ay argagixisadu usoo kala dhex gashay labada dhinac xidhiidhkooda iyo sida loo tuhmayo dadka argagixisada ah ee isku sheegaya inay muslimiin yihiin. Wadaada muslimiinta ahi waxay ku fashilmeen inay dhaleeceeyaan oo iska fogeeyaan waxyaabaha ay ku andacoonayaan dadka argagixisada ahi ee ay leeyihiin quraanku wuxuu muslimiinta farayaa inay wax laayaan. Waxaan markaa rabnaa inaan aragno wadaadada oo iyagu kasoo horjeeda xidhiidhinta la isku xidhiidhinayo argagixisada iyo islaamka markaasaan anaguna taageeri doonaa.
June 23, 2013 @ 03:06:48PM
dalka iiraan waa dal maafiyo ah, wax kale iska daayee waxay dafirtay inay caawimo u fidisay waaxda sirdoonka iyo amaanka ee Kenya. Dhamaantood waa argaggixiso.
June 23, 2013 @ 04:14:22AM
hadii ay dhab ahaantii argaggixiso yihiin, waa in ay cawaaqib xumada ay mutaysteen helaan, balse maaha inaynu door firfircoon ka ciyaarno xiisada ama colaada ka dhex aloosan Maraykanka iyo dunida Carbeed, waayo awood uma lihin aan dalkeena ku ilaalino hadiiba ay colaadu dalkeena usoo leexato!
June 12, 2013 @ 01:57:21AM
Miyuu jiraa daliil adag oo caddaynaya inay walxaha qarxa haysteen? Hadii ay sidaas tahay, markaa argagixiso waa argagixiso, dawlada kenyana masuuliyad ayaa ka saaran ilaalinta muwaadiniinteeda. Hadiise ay yihiin dad gobolka ay kasoo jeedaan awgii lagu dulmayo, markaa waa in la siiyaa fursad ay arji ku qaataan waana in si cadaalad ah loo maxkamadeeyaa.
June 9, 2013 @ 11:20:23PM
Waxay wadaan ma wanaagsana, sababtoo ah dalkii oo nabad ah ayay fawdo ka samaynayaan. Markaa waa in talaabo sharci ah laga qaadaa.
June 2, 2013 @ 02:44:58AM
Arrinkani wuxuu cashar u noqon doonaa dadka kale, waxaanay ogaan doonaan inay Kenya tahay meel aamin ah oo ay cid kastaa booqan karto hadii ay ujeedo wanaagsan u socdaan. Sidoo kale waxay ogaan doonaan inaynu leenahay dad maskax badan.
May 31, 2013 @ 07:26:05AM
Haddaynu nahay dadka Afrikaanka ah dabaqoodhinimada aynu dalalka reer galbeedka ah u nahay waxay inoo horseedi doontaa burbur dhaqaale, waayo hadii aynu iyaga ka amar qaadano, waxba kagama duwanaanayno dalal dhulkooda dhexdiisa lagu gumaysanayo. Waa inaan baadhitaan samaynaa oo aan go’aamadeena qaadanaa. Waxaan leeyahay ma qasabaa in wax kasta la inaga caawiyo, xitaa maskaxda?
May 30, 2013 @ 07:48:13AM
Faalooyin badan. Cumari Africa, waxaan qabaa waxaad tahay qof maangaab ah oo aan taariikhda waxba ka ogayn oo aan fahansanayn waxa meesha ka dhacayay. Sidaa awgeed waxaad u hadlaysaa cilmi la’aan, xitaa hadii aad sagaashan jir tahay balse aanad taariikhda waxba ka garanayn, ma fahmi kartid dhacdooyinka maanta jira, waxa maanta dhacayana kuma xidhiidhin kartid oo kuma fasiri kartid wixii taariikhda hore uga dhacay, waxyaabahaas oo ah kuwa dhacdooyinka maanta saamaynta ku leh. Markaa saxiib dalka Iiraan waa dal shar badan ama jeclow ama ha jeclaanin, waayo cirkaa midabkiisu waa buluug ama rumayso ama ha rumaysaninee. Taariikhdu waxay ina tusinaysaa hadii ay Iiraan noqoto dal awood badan, dadka xorriyadoodu way lumi doontaa, waxaana lagugu qasbi doonaa inaad adoon noqoto, dumarkaagana waa la kufsan ragaagana waa la dhufaani waxaana lagu qasbi doonaa inay shaqeeyaan. Ma ogtahay sababta aysan Iiraan ugu noolayn dad madow? Sucuudigu wuxuu ahaa dalka koowaad ee adoonsiga ka ganacsada, waxaanay dhufaaneen dhamaan wixii dad madow ah ee dalka joogay, taana waxay kaga duwanaayeen Maraykanka iyo Burtuqiiska, kuwaasoo iyagu adoomaha u fasixi jiray inay tarmaan si ay adoomo dheeraad ah u helaan. Iiraan waxay rabtaa inay qof kasta oo dunida ku nool ay ku qasabto inuu Muslim noqdo, hadii aad diidana waad dhiman doontaa. Bal ii sheeg sideebuu Islaamku ku faafay, ma wuxuu ku faafay dhiig la daadiyo mise in dadka la qanciyo. Iiraaniyiintu waxay ku faanaan dhaqankooda, laakiin miyaad ogtahay waxay caabudi jireen Islaamka ka hor, miyaadse ogtahay dhaqankoodu siduu ahaan jiray. Waxaa dalkooda ka jiray waxyaabo badan oo xun, xadaaradan ay leeyihiin waxay ahayd mid horumartay waxay ahayd mid aad u xun. Adiguna waxaad Afrikaanka leedahay horumara oo xumaanta iyo dambiga ku horumara. Adiga horumarku wuxuu kula yahay in ay dumarku maryo gaaban xidhaan oo ay sigaarka cabaan oo ay dhawr rag ah la saaxiibaan, kadibna ay bulshadu arrinkaa ogolaato oo ay u aragto wax casri ah oo horumar ah. Cumari waxaan ku leeyahay feker oo feker oo feker.
May 29, 2013 @ 06:58:44PM
Arrinkani maaha kaftan, waa inaynaan dhayalsan arrinka nabadgalyada, waa ayo cidda aan ogayn inay Iiraan tahay dal aragaggixiso ah oo rabta inay ujeedooyinkeeda ka fushato Kenya.
May 27, 2013 @ 09:50:46AM
Amaanku waa shayga ugu muhiimsan ee ay xukuumada Kenya aysan ahayn inay hilmaanto, markaa anigu waxaan taageersanahay fikrada mudane njorge.
May 27, 2013 @ 09:50:13AM
Aniga waxay ila tahay Iiraaniyiinta uma qorshaysnayn inay Kenya qaraxyo ka fuliyaan iyagoo aan dad reer Kenya ah gacan saar ka helayn, taasina waa sababta qaraxyo badan si qarsoodi ah loo qorsheeyo. Waxaynu la noolnahay dad hubka sameeya oo Japan iyo Kenya ah.
May 24, 2013 @ 01:59:28PM
Haa, aniguna sidoo kale waxaan raacsanahay Robert Kamau waxaanan leeyahay Kenya maaha masrax ay ku ciyaaraan Iiraaniyiinta iyo cidkale toona.
YOHANA SHIJA MASALU
May 24, 2013 @ 01:52:42PM
Falka ay ku keceen nimankaas reer Iiraan wuxuu ahaa fal aan xadaari ahayn, waayo falalka ay argagixisadu gaystaan waxay horseedaan inay dhintaan dad aan waxba galabsan. Anigu shakhsiyan waxaan ciidanka bilayska Kenya ku taageersanahay siday nimankaas maxkamada u saareen. Markaa cidii dambigu ku cadaado waa in rumaan loo jaraa oo la ciqaabaa. Taariikhdu waxa ina tusinaysaa in dalka Iiraan uu ka midyahay dalalka islaamka ah ee aysan waligii colaaduhu ka dhamaanin, waana u caadi dadka iiraan inay falal is miinayn ah ku kacaan oo ay sidaa dad ku laayaan. Waxa laga yaabaa in arrinkaas ay sabab u tahay caqiidada qaldan ee quluubtooda lagu beeray. Waa wax aad u layaab badan in aad aragto sida ay muslimiintu ugu nool yihiin dalalka kiristaanka ah iyagoo farxad ku jira oo aan wax kadeed ah la kulmin, halka ay muslimiinta ku nool dalalka islaamka ahina ay ku jiraan nolol mashaakilkeedu badan yihiin iyo dagaalo. Markaa waa maxay wanaaga uu islaamku leeyahya?
Waxaan markale leeyahay Kenya amaankeeda ha la ilaaliyo hana lagu taageero xukuumada dagaalka ay kula jirto falalka argagixisada ah iyo dadka argagixisada ah laftooda. Waa qasab in arrinkaas ay dadku dhamaantood qalbiga ku hayaan oo aysan dawlada iyo bilayska kaligood cidla kaga tagin.
May 24, 2013 @ 03:41:30AM
Anigu ma hubin karo in nimankaas reer Iiraan ay ahaayeen cidda bambaanooyinkaas samaysay, laakiin haddaynu nahay dadka Afrikaanka ah waxaynu nahay kuwo inta badan ku dhaqma waxay soo jeediyaan quwadahay waawayn iyadoo aysan jirin sabab taa inagu kalifaysaa. Markay dhibaatooyinku dhacaan, waxaynu farta ku fiiqnaa dadyowga ajaanibka ah ee asalkoodu carabta yahay. Waxaase inagu waajib ah inaynu inagu hoos isu eegno, waayo arrinkaasi waligii horumar inama gaadhsiin doono. Dadkiina hadaladaas dhagaysanaya waa inaad ogaataan inay idiin been sheegayaan si ay danohooda u gaadhaan. Waa inaad adeegsataan awoodihiina maskaxeed si aad jawaabo sax ah ugu heshaan dhibaatooyinka haysta dalalkiina. Hadii ay dadka reer Kenya ku faanayaan burburinta xidhiidhada diblumaasiyadeed ee dalkoodu lahaa, way yeeli karaan sidaas, laakiin aakhirka way is qoomamayn doonaan. Teeda kale, waxaan idiin sheegayaa hadaad tihiin reer Kenya inaydaan waligii gaadhi karin Iiraaniyiinta haddayno noqoto xag dhaqaale, mana tihiin kuwo caawimo dhaqaale siiya, balse waxa idinka dhexeeyaa waa ganacsi, taana cid kastaaba meeshay doonto way ka samayn kartaa. Waxaan idin waydiinayaa miyaad run ahaantii aragteen iyagoo walxahaas qarxa meesha dhigaya, mise nidaam kale ayaad wax ku ogaateen, mise waxaad u tuhmaysaan uun inay Iiraaniyiin yihiin? Markii uu qaraxu Tanzania ka dhacay, waxay xidheen dad sucuudiga u dhashay, inkastoo cidii qaraxaa fulisay la arkayay. Waxaad is waydiisaan Afrikaanka haddaad tihiin maxaa idinka horjooga inaad gaadhaan horumar dhaqaale iyo mid xaga amaanka ahba. Waxaan idin odhan lahaa talooyin ka qaata kuna dhaqma talooyinkaas, kadibna intaad idinkuna dhankiin ra’yigiina kaga dartaan la imaada go’aamo wax ku ool ah.
May 24, 2013 @ 03:28:40AM
Muslimiintu meel kasta oo ay joogaan hadaad tihiin reer Kenya ama dadka u daacada ah Maraykanku waxaad u haysataan inay yihiin dad argaggixiso ah. Dunida maanta arrinkaasaa ka taagan, hadii aad muslimiinta ku xidhiidhiso inay argagixos yihiin, sideebaa maraykanka dhexdiisa lagaaga aqbali doonaa? Waxaan sidaa u leeyahay xitaa Tanzania dhexdeeda waxaa dhacday inay dad bambaano tuureen, laakiin cidii falkaa loo xidhay waxay ahayd carab, waayo dabeecad ahaan ayay argaggixiso u yihiin.